Ingrid Wikholm sparktur အပေါ် HSK / HBU ရဲ့ကိုယ်တော်ကိုဟစ်ကြော်ပါးလွှာသည်သူ၏ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုပေးစေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းကိုယူ.
အဆိုပါရပ်တည်ချက် ယူ. စက် smearing နှင့် Holmes အသင်းအဖွဲ့များသင့်ရဲ့ပေါင်ထားသောဥစ္စာကို ladle! တစ်ဦးကနွေးထွေးစွာကြိုဆိုအလှူငွေ. ဘုရားကျောင်းမှာအပေါင်စည်ထဲမှာပစ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာတက်ခူးကြ. OBS! ငါတို့သည်လည်းဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်တင်သွင်းသံဗူးကိုလက်ခံ!
HBU နှင့် Holmes အားကစားကလပ်ကိုသူတို့အဟောင်းကိုသံဗူးများနှင့်ပေပုလင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များကိုထောကျပံ့ဖို့ Holmes နှင့် Sundsvall ဒေသအားလုံးကမ်းလှမ်း. ဒါဟာကိုယ့်တူရဲ့, သေးငယ်တဲ့အလှူငွေပေးအပ်နေစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်မျက်နှာသာလုပ်နေတာ! သငျသညျမြို့မှအပေါင် lugging ကိုလည်းရှောင်ရှားရန်နှင့်ရင်ဆိုင်ရ အချို့သောsmåkronorများအတွက်စက်စုဆောင်း. ငါတို့အဘို့အ, သို့သော်, တစ်ဦးချင်းစီအများအပြားအကူအညီနဲ့မတူဘဲကက! ဘောင်းဘီ Slanten လုံးလုံးလြားလြားတာဝန်ပေး 50/50 HSK နှင့် HBU အကြား.
Holmes ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ sorting အဆိုပါစွန့်ပစ်ရန်ပါးလွှာလာမယ့်särkildအစိမ်းရောင်ပေါင်ထားသောဥစ္စာကို Add. အဆိုပါစည်ကိုမှန်မှန်ကျနော်တို့ထို့နောက် empties.
ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုအတူအမှိုက်ပုံးထဲသို့အိတ် (ခွဲထားခဲ့သည်ပါပေ / Burke / အိတ်နှုန်းသိုက်ဖန်!).
တချို့အိတ်တက်စုဝေးစေနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့ဖယ်ရှားပစ်ရချင်သည့်အခါကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေး – 0730-332944.
– alt. 1 Holmes နှင့် Sundsvall ၌သူတို့ကိုစွန့်ခွာ, စာတို:အရပျအကွောငျးပိုမိုအင်ဖိုအတွက်စာသားမ / ခေါ်ဆိုခ.
– alt.2သူတို့ကိုတစ်နေရာရာခေါ်သွား Get ကိုယ့် Holmberg / LIDEN- / Kovland- / Sundsvall ဧရိယာ. စာတို:စာသားကို / မခေါ်နှင့်မည်မျှအိတ်ဆိုသညျကား, သင် / အလုပျရှငျနထေိုငျသညျ့နရောကျနော်တို့အရာကြွင်းလေပြုပါလိမ့်မယ်!
ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံစုဆောင်းသို့မဟုတ်သင်အသက်ရှင်ကြပါကူညီပေးလိုတခြားနေရာဆွီဒင်တွင်? သငျသညျလုံလောက်သောရောက်နေတယ်ဆိုရင် “pantad” အနည်းငယ်သာပိုဝင်စား “ရွာစိတျဓာတျ” သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာတိစုဆောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီအခမဲ့ခံစားရ, သငျသညျအသကျရှငျနေရာတိုင်းမှာ. အကြှနျုပျတို့သညျရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးအပေါ်စွန့်ခွာအထူးလက်အိတ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုတပ်ဆင် သငျသညျအနီး drop-ချွတ် site ကို (သငျသညျတစျဦးနှင့်တစ်ဦးမတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်မရန်ရှိသည်ဘယ်တော့မှ!).
နော်ဝေအဟောင်းအပေါင်စက်တွေမေ့လျော့ခြင်းနှင့် Holmes ကျေးလက်ဧနောက်သည် Holmes SK ကိုထောကျပံ့…
17/12: utah: သတိပေးခြင်းလူတန်းစား 1, နှင်း, V ကို ... Över Medelpadskusten natt mot m&ari... ဆက်ဖတ်ရန်
Ett lättare snöfallsområde fortsätter ... ဆက်ဖတ်ရန်